Tricks kuponesa data pane iyo iPhone neIOS 10 | IPhone nhau
Ignatius Room | | iOS 10, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Sezvo makore achifamba, nharembozha yedhata iri kuwedzera mukukwanisa, asi kunyangwe zvakadaro, zvirokwazvo pane inopfuura kamwe chiitiko takakwanisa kupedza mwedzi nemadhora edu uye taifanira kuishandisa nekumhanyisa kuderedzwa zvekuti isu unoda kufonera anoshanda kuti achinje chiyero kana kuhaya mashoma ekuwedzera megabytes kuti akwanise kupedzisa mwedzi mune mamiriro Nguva dzese Apple painoburitsa vhezheni itsva yayo yekushandisa system yemafoni nemapiritsi, Inowanzo kuperekedzwa nemamwe mabasa matsva ayo, asingazvizive, anowedzera mutengo we data redu.
Muchikamu chino isu tichaedza kukupa akati wandei matipi kuitira kuti mwero wedu usanyangarika nekukurumidza.
1 Maitiro ekuchengeta nharembozha neiyo iPhone muIOS 10
1.1 Dzima iCloud nharembozha
1.3 Disable otomatiki inogadziridza kubva iTunes uye neApp Store
1.4 Bvisa Wi-Fi Kubatsira
1.5 Dzvitsa kushandiswa kwedata kune mamwe maapplication nemitambo
1.6 Nongedzo yekumashure
1.7 Bvisa data renhare kubva kuApple Music
1.8 Chinja iyo yekumhanyisa mhando yekushambadzira kunyorera seSpotify, Netflix
1.9 Shandisa sarudzo Govera iyo internet neruzivo
1.10 Shandisa Google Chrome kufamba
1.11 Shandisa iyo Opera Mini browser
1.12 Usajekese mabhurawuza ako
1.13 Dzima otomatiki vhidhiyo yekutamba paFacebook neTwitter
1.14 Delete iyo Instagram uye Facebook application
1.15 Dzima kurodha otomatiki paWhatsApp, Teregiramu, Mutsara ...
1.16 Isa Onavo Wedzera
Maitiro ekuchengeta nharembozha neiyo iPhone muIOS 10
Dzima iCloud nharembozha
Rimwe remabasa akakosha eIOS ndeyeICloud, iyo inotipa mukana wekuti uenzanise data redu rese pamidziyo yese yekambani iri muCupertino inosangana neakaundi imwechete. Mazhinji ekushandisa atakaisa pane yedu kifaa shandisa iCloud kuchengetedza makopi ekuchengetedza kana kuwiriranisa data redu.
iCloud inotipa sarudzo mbiri dzekuwiriranisa ruzivo. kuburikidza neWi-Fi kana kuburikidza neyedu nharembozha. Nokusingaperi iCloud inomesa kuwiriranisa neyedu nharembozha, basa ratingaite kuti rishande kuburikidza neZvirongwa> iCloud> iCloud Drive, uye nekumisa iyo Use mobile data tab.
Notifications dzinoonekwa munzvimbo yedu yekupedzisira kana paine shanduko mukati mekushandisa, ingave email, meseji, kugadzirisa ... Izvi zvinoshanduka zvine mutsindo zvinobva pa internet uye kana isu tisina kubatana kune netiweki yeWi-Fi uye kana tiine mafomu akawanda anotitumira notices, inogona kuve dambudziko needu data rate.
Disable otomatiki inogadziridza kubva iTunes uye neApp Store
Imwe yemabasa anoitwa natively, ndeayo otomatiki kurodha pasi kwekushandisa uye kugadzirisa. Semutemo wenguva dzose kana iwo maapplication asingapfuure 100 MB, inogona kuvandudzwa uye kurodha pasi kuburikidza neyedu nharembozha data, iyo inogona kuve yakakosha mutengo mune yedu data rate, kunyanya kana isu tine akawanda maficha akaiswa pane yedu kifaa.
Para dzima otomatiki zvigadziriso uye kurodha pasi kubva kuTunes neApp Store Isu tinoenda kuZvirongwa> iTunes Chitoro uye App Chitoro uye kumisa iyo Shandisa nharembozha dhata.
Bvisa Wi-Fi Kubatsira
Ichi chaive chimwe chezviitiko zvitsva zvinouya kubva muruoko rweIOS 9, chiitiko chine basa rayo mune dzimwe nguva, asi mune mazhinji acho, zvinokuvadza kupfuura kubatsira kune yedu data rate. Iri basa inobvumira kugonesa nharembozha kana isu takabatana kune isina kusimba Wi-Fi chiratidzo tisina kuona, izvo zvinogona kureva kuti mwero wedu unopera nekukurumidza.
Para bvisa Wi-Fi Kubatsira Tichaenda kuZvirongwa> Dhata renhare uye uncheck iyo yeWi-Fi Rubatsiro tebhu.
Dzvitsa kushandiswa kwedata kune mamwe maapplication nemitambo
Zvichida kuti kana isu tikatanga kutarisa mashandisiro anoitwa nechero application kana mutambo une internet kuwana, hatina kurova chinotyisa kana tichiona kuti imwe app kana mutambo uri kutora ratero yedu. Kana isu tisingawanzoshandisa iko kunyorera kana Hatidi kuti iwe ushandise yedu data rate, tinogona kuimisa nekudzivirira iwe kubva pakushandisa mwero uye nekungoshandisa iyo yeWi-Fi yekubatanidza ye iPhone yedu kana iPad.
Para dzinga internet kuwana maapplication kana mitambo, tinoenda kuZvirongwa> Nharembozha. Mukati meiyi sarudzo kuchaonekwa ese mashandisirwo uye mashandisiro avakaita panguva iyoyo yeedu data rate.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti kubatsira kweiri basa kwakanakira, nekuti nguva dzese mashandisiro anoita basa iri anogara achigadziriswa pese patinoavhura, Icho chaicho musoro wemusoro kune ese edu bhatiri uye yedu data mobiles. Facebook muenzaniso wakajeka wechishandiso chinonwa bhatiri redu uye neyedu nharembozha zvakaenzana.
Neraki isu tinogona gadzirisa kuti ndeapi maapplication anogona kuvandudzwa kumashureZvinoenderana nezvatinofarira kana isu tinogona kuvamisa zvese zvizere, nenzira iyi zvese data nebhatiri zvichagara kwenguva refu. Kuti tisavaremadze, isu tinongofanirwa kuenda kuZvirevo> Zvazvose> Gadziridza kumashure.
Bvisa data renhare kubva kuApple Music
Apple's yekushambadzira sevhisi sevhisi, iyo inotova nevamiririri gumi nemamiriyoni gumi nematanhatu, inotibvumidza kuteerera mimhanzi kuburikidza neyedu data data. Kunyangwe chiri chokwadi kuti kunwa kwacho hakuna kunyanya kuwanda pamusoro pehunhu hwahunopa, tinogona kudzima kushandiswa kwedata redu, teerera kumimhanzi, kugadzirisa raibhurari uye kurodha mifananidzo. Nekuti dzima Apple Music dhata yekushandisa, tichaenda kuZvirongwa> Mumhanzi> Mobile data.
Chinja iyo yekumhanyisa mhando yekushambadzira kunyorera seSpotify, Netflix
Sarudzo inoshanda kwazvo yekuchengetedza data renhare ndeyekudzora mhando yekushambadzira mimhanzi uye vhidhiyo kunyorera seSpotify, Netflix, HBO kana kuzvimisa zvakananga ... Semutemo wakazara uye nekutadza, mhando yakagadzirirwa otomatiki, asi izvi zvinoshandiswa zvinotibvumira kuti tigadzirise hutano hwekuberekwa kana tisingadi kubvisa kushandiswa kwayo kuburikidza nedata.
Shandisa sarudzo Govera iyo internet neruzivo
Imwe yesarudzo idzo vashandisi vanoshandisa zvakanyanya kugona kwekugovana nharembozha yeiyo iPhone neiyi iPad kana komputa. Iyi sarudzo yakanaka kana tiri munzvimbo isina Wi-Fi uye chishandiso chatiri kushandisa chinoda kubatana kweinternet. Kune chaiwo kesi inokodzera, asi kana tikashandisa zvakanyanya, dhata redu re data rinogona kupera nekukurumidza.
Shandisa Google Chrome kufamba
Kusiyana neSafari, Google Chrome ine sarudzo yekudzora kushandiswa kwe data nhare paunenge uchitsvaga. Kana isu tavhura iyo Data Saver, mazhinji ewebhu traffic anopfuura nemaseva eGoogle usati wadhanilodha kuchigadzirwa. Google server inomanikidza iyo data saka zvishoma zvaro inotorwa.
Para shandisa iyi sarudzo iyo nekusarudzika inogoneswa chete yekubatana kweWi-Fi, isu tinoenda kubva mukati mekushandisa kuenda kuZvirongwa> Bandwidth uye tinya paPeji peji rewebhu kuratidza sarudzo dziripo: Nguva dzose, Chete paWi-Fi kana Never.
Shandisa iyo Opera Mini browser
Opera ndechimwe chevabhurawuza icho chinotibvumidza isu ku rkuderedza kushandiswa kwe data redu renhare patinofamba nechikepe. Muchokwadi, iyo yakagadzirirwa kunyanya kune iro basa.
Usajekese mabhurawuza ako
Kuti tichengetedze nzvimbo pane edu zvishandiso, kubvisa cache kunogona kutibvumidza isu kuchengetedza yakawanda nzvimbo, asi inopesana nekudyiwa kwedataSezvo iwo mapeji ewebhu atinoshanyira zvakanyanya, tinofanirwa kurodha zvakare yakawanda yezvinhu zvakagadziriswa zvewebhu, data iro rinowanzo chengetwa pachigadzirwa kuti rikurumidze kurodha kwadzo.
Dzima otomatiki vhidhiyo yekutamba paFacebook neTwitter
Iyo mania iyo mamwe makambani anayo otomatiki shandisa kutamba kwevhidhiyo apo isu tiri kushandisa iyo app zvinoita kunge isina magumo. Facebook neTwitter ndezvekushandisa izvo nekutadza zvine sarudzo yakamisikidzwa nekukasira, asi nerombo rakanaka tinogona kuimisa kuitira kuti kuberekwazve kwemavhidhiyo kuitike kana tiri paWi-Fi network.
Delete iyo Instagram uye Facebook application
Mashandiro aMark Zuckerberg, Instagram neFacebook, haangori ekudonhedza bhatiri chete asi zvakare gomba dema iro kunopinda data rakawanda, kunyangwe tichimisa kutamba kwega kwemavhidhiyo paFacebook, sekureva kwandakakurudzira iwe poindi yapfuura. Pa Instagram ichi chishandiso chinoziva nezvekushandisa kwedata asi panzvimbo pekuchigadzirisa, inotibvumidza kusiyanisa marongero kuitira kuti iwe ushandise shoma data.
Dzima kurodha otomatiki paWhatsApp, Teregiramu, Mutsara ...
Pakati pezuva rese tinogashira huwandu hukuru hwemavhidhiyo, mapikicha uye maGIF, zvinoenderana nechishandiso (WhatsApp haisati ichipa icho). Kana isu tave nekutora otomatiki yakagoneswa, nekufamba kwemazuva, yedu data rate inogona kukanganiswa zvakanyanya. Sezvineiwo tinogona kudzima kuti ndezvipi zvemukati zvinogona kutorwa pasi otomatiki uye iyo isiri. Sarudzo yakanakisa ndeyekumisa kurodha pasi kwega kwega mavhidhiyo, nekuti iri mhando yefaira inogona kutora iro rakawanda data kubva pachiyero chedu.
Isa Onavo Wedzera
Onavo Kuwedzera kunobatsira iwe kusevha nharembozha saka unogona kushandisa nguva yakawanda uchiita zvaunoda kuita parunhare asi usingawedzere bhiri rako. Mushure mekuisa iyo app, inoshanda kumashure kana iwe ukashandisa nharembozha kuona kuti ungachengeta sei. Onavo Wedzera kudhawunirodha iyo mifananidzo kana iwe uchipururudzira kwairi, kuti usashandise data rakakosha mumifananidzo raungave usingaone, rinoyera mhando yemifananidzo uye nekuchengetwa kwedata zvinoenderana nekumisikidza kwako, zvinobva zvadzimwa paunenge batanidza kune network yeWi-Fi. Fi. Iko kushanda kweichi chishandiso kwakafanana chaizvo neicho cheChrome nekuti ruzivo rwese rwunopfuura nemaseva ekambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Tricks kuponesa data pane iyo iPhone neIOS 10
Nezve Onavo, zvinondipa dambudziko, kana ndichishandisa dhata iyi onavo VPN inovhara SIRI, inomira kushanda ichindiudza kuti handina internet yekubatanidza uye kana ndikabvisa onavo VPN inoshanda kwandiri.
Zvinoitika kune mumwe munhu here?
Ini ndoda kuziva kana kushandisa iyi vpn profaili yangu yega data (maakaunzi, mapassword, nezvimwewo) zvinogona kukanganiswa kana kutambura. Ndicho chega chinhu chinondinetsa. Ndatenda.
Apple inotangisa iMessage App Store nemapurogiramu, mitambo, uye zvitupa
Microsoft inotangisa chimwe kushambadzira kushoropodza MacBook uye yayo isiri-yekubata skrini